DHEGEYSO-Musharax Faroole=Waxbaan ka qabanaya arrimaha Gallan iyo gobolka Sool – Radio Daljir
DHEGEYSO-Musharax Faroole=Waxbaan ka qabanaya arrimaha Gallan iyo gobolka Sool
Luulyo 16, 2016 3:27 b 0
Garoowe, July 16 2016, Madaxweynihii hore ee Puntland ahna musharaxa xilka madaxtinimada Soomaaliya Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Maxamuud Faroole, ayaa maanta siweyn loogu soodhoweeyey magaalada Garoowe ee xarunta dowladda Puntland.
Musharax Faroole oo kasoo kicitimay saaka magaalada Qardho ayaa waxaa soodhoweyntiisa ka qaybgalay madaxweyne ku-xigeenkii xilligii Faroole Cabdisamad Cali Shire iyo qaar kamid ah shacabka kunool magaalada Garoowe.
Mar uu lahadlayey shacabka kunool magaalada Garoowe ayaa waxa uu Cabdiraxmaan Faroole kudheeraaday ololihiisa doorashada iyo xallinta khilaafka u dhexeeya xukuumadda Puntland iyo Cabdisamad Maxamed Gallan.
“Xoolo nabad ah ayaa naq lageeyaa waxaan u sheegayaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed in aysan nololi jiri doonin haddii aysan nabadgelyo jirin, nabaddana ka shaqeeya”, ayuu yiri Faroole
DHEGEYSO-Barnaamijkii Ciyaaraha Daljir ee sports news iyo Zucdi Cawiif.
DHEGEYSO-Madaxweyne Gaas oo hambalyo u diray shacabka iyo dowladda Turkiga.